महिनाको पाँच दिन मलाई शान्तिले बस्न देऊ
- स्वस्तिका बख्रेल
त्याे दिन कक्षा कोठामा मलाई शारीरिक रूपमा निक्कै अप्ठेराे महसुस भइरहेकाे थियाे । चिसाे अनुभव गरिरहेकी थिएँ । हल्का पेट पनि दुखिरहेकाे थियाे । महिनावारी भयाे कि भन्ने लाग्याे । तर, म निश्चित थिइनँ । निक्कै अहसज भएपछि शाैचालय गएँ । त्यहाँ पुगेपछि यकिन भयाे, अघिकाे चिसाे । मेराे भित्री कपडा रगतले भिजेकाे रहेछ ।
प्याड पाइने आशामा म शिक्षक कक्षतिर गएँ । त्यहाँ बसेका शिक्षकहरूसँग प्याड माग्न अप्ठेराे लाग्याे । शिक्षिकाहरू कक्षा पढाउन गएकाले म केहीबेर अफिसमै कुरेर बसेँ । पछि एकजना मिस आउनुभयाे अनि मैले उहाँसँग प्याड मागेँ । तर, मलाई मिसले 'टालाे लगाउनू, प्याड छैन' भन्ने जवाफ दिनुभयाे ।
मलाई एकदम नराम्रो लाग्याे । आँखाभरि आँसु र रगत लतपतिएकाे शरीर लिएर म कक्षा काेठामा फर्किएँ । एकातिर शिथिल शरीर, त्यसमाथि रगतकाे सिकसिकाेले म त्यहाँ सजिलाेसित बस्न सकिरहेकी थिइनँ । सहज नहुँदानहुँदै म बेञ्चमा मुन्टाे अड्याएर सुतेँ ।
मलाई यस्ताे अवस्थामा देखेपछि केही साथीले 'के भयाे' भनेर साेधे । मैले समस्याबारे बताएँ । लगत्तै दुईजना साथीले पसलबाट प्याड ल्याइदिए । र, मैले शाैचालय गएर रगत सफा गरेँ अनि प्याड लगाएँ । अर्काे एउटा कक्षापछि स्कुल छुट्टी भयाे र घरतिर लागेँ ।
घरमा प्याड फेरेर कपडा (टालाे) लगाएँ । बहिनीले खाना तयार गरेकी रहिछन्, खाएर सुतेँ । पेटकाे दुखाइ नराेकिएकाले त्याे दिनभर सुतेर बिताएँ । भाेलिपल्ट शनिबार थियाे । नुहाइधुवाइ गरी रगत लागेकाे कपडा धाेएर काैशीमा सुकाउन गएकी थिएँ । मलाई छिमेकी आन्टीहरूले नकचरी, मातिएकी, पातिएकी, छाडा, चरित्रहीनजस्ता शब्दले गाली गर्नुभयाे । रजस्वला हुँदा लगाएकाे कपडा धाेएर सबैले देख्नेगरी सुकाएकाेमा उहाँहरूकाे आपत्ति थियाे ।
मैले प्रतिवाद गर्ने काेसिस नगरेकीचाहिँ हाेइन, 'महिनावारी हुनु पाप हाे ? गल्ती हाे ?'
तर, 'यस्ती लाज नपचेकीसँग के बाेल्नु' भन्दै उहाँहरू आफ्नाे काेठाभित्र छिर्नुभयाे ।
यस्ताे गाली र अपमानपछि मैले आफैँलाई प्रश्न गरेँ- कतै मैले गलत नै त गरिरहेकी छैन नि ? विद्यालयमा हामीजस्ता छात्राका लागि प्याड नहुने, भएका प्याड पनि 'डेट एक्स्पाएर' अनि गुणस्तरहीन हुने, भित्री कपडा घाममा सुकाउँदा चरित्रहीनकाे ट्याग लाग्ने ।
यदाकदा म सुन्छु, नारीलाई देवी भनेकाे । तर, यसरी देवी भन्दैमा नारीकाे सम्मान हुँदैन । सम्मान नै गर्ने हाे भने उनीहरूका समस्या बुझ्नुपर्छ । हामीलाई पूजा गर्नुपर्दैन । महिनाकाे पीडादायी पाँच दिन शान्तिकाे सास फेर्न दिइयाेस् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १८, २०७७, १५:५३:००
लहानमा फेरि सुनचाँदी व्यवसायीको घरमा लुटपाट2min read
म्यानमारमा सैन्य शासनविरुद्धको आन्दोलनमा ७ सय बढीले गुमाए ज्यान, ३१ सय थुनामा 1 min read
अझै भएन मेलम्चीको पानी वितरण3min read
बोलाइएका मात्रै अतिथि होइनन्, नामी भाषाविद् पनि यतै लागेकाे देख्दा अचम्म लाग्छ4min read